Fumana amazwi ukuba uthethe umvuzo kumntu othandekayo
Unqulo & Umoya Imingcwabo
Iseluleko Nokomoya Xa Umntu Othandayo Ufa
Uthetha ntoni kumntu omthandayo xa ufunda ukuba unemihla embalwa nje ukuba aphile? Ngaba uqhubeka uthandazela ukuphilisa kwaye ugweme umxholo wokufa ? Emva kwakho konke, awufuni ukuba umthandi wakho ayeke ukulwa nobomi, kwaye uyazi ukuba uThixo unako ukuphilisa.
Ngaba usho igama elithi "D"? Kuthekani ukuba abafuni ukuthetha ngawo? Ndandilwa nazo zonke ezi ngcamango njengoko ndibukele ubaba wam othandekayo ukhula buthathaka.
Ugqirha wandixelele umama kunye nam ukuba uyise wayenomhla okanye amabini asele ukuba aphile. Wayebukeka endala elele apho ebhedini lesibhedlele. Wayethule kwaye esele iintsuku ezimbini. Umqondiso kuphela wobomi awawunikelayo wawunomsebenzi wesinye isikhathi.
Ndamthanda loo ndoda endala, kwaye ndandingafuni ukulahlekelwa nguye. Kodwa ndazi ukuba kufuneka simxelele oko sikufundile. Kwakuyisikhathi sokuthetha ngokufa naphakade . Yayiyintloko kwiingqondo zethu zonke.
Ukuphula iiNdaba ezinzima
Ndamvumela ubaba ukuba azi ukuba ugqirha wayesitshele ntoni, ukuba kwakungekho nto enokuyenza. Wayemi emlanjeni okhokelela ebomini obungunaphakade. Ubaba wayekhathazekile ukuba i-inshurensi yakhe ayiyi kubakhokelela zonke izibhedlele zezibhedlele. Wayenomdla kumama wam. Ndamqinisekisa ukuba yonke into yayilungile kwaye sasithanda umama kwaye yayiza kumnyamekela. Ngezinyembezi emehlweni am, ndamxelela ukuba ingxaki kuphela yinto esiza kumkhumbula ngayo.
Ubaba wayilwa lulo oluhle lokholo, kwaye ngoku wayeya ekhaya ukuze abe noMsindisi wakhe. Ndathi, "Ubawo, undifundise kakhulu, kodwa ngoku uzondibonisa indlela yokufa." Wambumba isandla sam nzima, kwaye, ngokumangalisa, waqala ukumomotheka. Uvuyo lwayo lwalukhukhulayo kwaye ke lwam. Andizange ndiqaphele ukuba iimpawu zakhe ezibalulekileyo zazihlawuleza.
Ngemizuzwana, ubaba wayesekho. Ndandibukela njengoko wayiswa ezulwini.
Ayinakuthathaka kodwa Amazwi ayimfuneko
Ngoku ndifumanisa kulula ukusebenzisa igama "D". Ndiyicinga ukuba i-sting isusiwe kuyo. Ndiye ndathetha kubahlobo abanqwenela ukuba babuyele emva kwexesha kwaye babe neengxoxo ezahlukileyo kunye nalabo abalahlekileyo.
Ngokuqhelekileyo, asifuni ukujamelana nokufa. Kunzima, kwaye noYesu wayekhala. Nangona kunjalo, xa simkela kwaye sivuma ukuba ukufa kusondele kwaye kunokwenzeka, siyakwazi ukubonisa iintliziyo zethu. Sinokuthetha ngezulu size sibe nobuhlobo obusondeleyo kunye nomthandayo. Siyakwazi ukufumana amagama afanelekileyo okuthetha.
Ixesha lokuthetha ukuhlaselwa kubalulekile. Yindlela esivumela ngayo ukuba sihambe size sinike umthande wethu othandweni lukaThixo. Ngenye yeendlela ezinamandla kakhulu zokholo lwethu. UThixo usinceda sithole uxolo kunye nenyaniso yokulahleka kwethu, kunokubandezeleka. Amazwi okuhlukanisa anceda ukuzisa nokuvalwa.
Kwaye kubaluleke gqitha ukuba amaKristu aqonde ukuba sinamagama athembekileyo, ukuba asithuthuzele: "Kude sidibane kwakhona."
Amazwi athi Intle
Nazi izicatshulwa ezimbalwa zokugcina ukukhumbula engqondweni xa umhlobo wakho esondele ekufeni.
Uninzi lwezigulane ziyazi xa zifa. Umongikazi waseMassachusetts ogulayo uMaggie Callanan wathi, "Xa abo begumbi bengakhulumi ngako, kunjengomvukazi obomvu kwi-tutu apho wonke umntu ehambahamba engazange amkhathalele .Umntu ofa uyaqala ukuzibuza ukuba akukho mntu ufumanayo. yongeza uxinzelelo-kufuneka bacinge ngeemfuno zabanye kunokuba bajongane nabo. "
Yenza uninzi lweetyelelo zakho, kodwa ube neengxaki njengoko kunokwenzeka kwiimfuno zakho. Ungathanda ukulibethela iculo eliyintandokazi, ufundele kwiZibhalo, okanye uxoxe ngezinto owaziyo ukuba ziyazinandipha. Musa ukuyeka ukuthetha. Oku kunokuba ngumthombo omkhulu wokuzisola.
Ngamanye amaxesha inkunkuma ingamema impendulo yokuphumula. Umthandi wakho unokulinda imvume yakho yokufa. Nangona kunjalo, ukuphefumula kokugqibela kungabakho iiyure okanye kwimihla kamva. Ngokuqhelekileyo, isenzo sokuthi ukuhlawula kungaphindwa kaninzi ngamaxesha amaninzi.
Thatha ithuba lokubonisa uthando lwakho kwaye unikezele ukuxolelwa xa kuyimfuneko. Vumela othandekayo wakho wazi ukuba uya kumkhumbula kangakanani. Ukuba kunokwenzeka, jonga amehlo abo, bambambe isandla, hlalani kufuphi, kwaye nize nilumke ezindlebeni zabo. Nangona umntu ofayo angabonakala engaphenduliyo, uhlala ekwazi ukukuva.
Iingcebiso ezingakumbi zokuthetha nomntu othandekayo:
Ngokuqhelekileyo (Mis) Iinkolelo malunga nokuThetha
Ncedisa Umntwana osemncinci Ukubhekana nokufa
Ukusebenzisana nomntu obulala
Uhambo Oluya Ekufeni
U-Elaine Morse, umnikelo kwiziko le-Christianity yakwa-About.com, uyazi kakuhle ukulahleka. Emva kokufa kukayise kunye nezihlobo ezihlobo kunye nabahlobo bakhe, u-Elaine wanconywa ukuba ancede amaKristu akhathazekile. Iingoma zakhe eziphakamisayo, iindinyana kunye nezinto eziprintwayo zenzelwe ukuthuthuzela nokukhuthaza ukuba zixhaphaze iintsapho. Ngolwazi olungakumbi, tyelela i-Bio Page ye-Elaine.
I-Funniest Memes i-Mocking News Fox
I-Architecture eFransi: Isikhokelo Sabahambi